Dambiisha Delivery oo leh tulips iyo irises "Nus saac ka hor guga" ee Moscow - Dalbo ubax
Dambiil leh tulips iyo irises "Nus saac ka hor guga"
Dambiil ka kooban gabbaldayaha 5 kumbiyuutar, mini gerberas 4 pcs, carnations 3 pcs, roses 5 pcs, panicuma 6 pcs, alstroemeria 4 pcs, salal 1 pack, dambiil.
7750 ₽ Dambiil ubax leh "Udabeelaha Xagaaga"
Bouquet midabbo dhalaalaya oo ubaxyo kala duwan ka kooban: gerbera mix 12, white alstroemeria 5, white bush chrysanthemum 3, pink chrysanthemum 3, small chamomile 5, purple lisianthus 5, solidago 6, salal 1 pack, farsamada duuduuban.
8250 ₽ Bouquet of ubax "Hit xilli ciyaareedka"
Bouquet of roses pink pink roses 11 kumbiyuutar, chamomile yar yar 10 kumbiyuutar oo leh cagaar qurxin leh oo ku jira sanduuqa hadiyadda.
5750 ₽ Bouquet of-aadanka buufinta iyo ubaxyada "jilicsan"
Bouquet of-the-barnet of pink of the "Aqua" variety, 11 kumbiyuutarro leh cagaar lagu qurxiyo - bastoolad, qurxin: farsamo iyo dareemid 3D, xarig.
2500 ₽ Bouquet of ubax "Ubax casaan"
minigerbera 15, pistach, qurxin
3050 ₽ Bouquet Gerbera "Muusikada Xagaaga"
Dambiilaha buluugga buluuga ah 2 kumbiyuutar, buluug Vanda orchid 8 kumbiyuutar, lilac moon carnation 20 pcs, pink freesia 9 pcs, terry lilac eustoma 8 pcs, lilac matiolla 6 pcs, alstroemeria (pink and lilac) 9 pcs, pink spray chrysanthemum 7 pcs , Eucalyptus 1 xirmo, dambiil, xargaha.
19730 ₽ Dambiil ubax leh "Paris"